Ny tantarantsika | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Ny brainchild ny niakatra-sy-haino aman-jery avy mpandraharaha Ryan Salazar, Broadcast Beat sary ny ny niches izay efa nanary baovao hafa kely Ka hanohona ny tsena sy ny teknolojia vaovao namorona eo taorian'ny. "Navoakan'ny Broadcast Beat Magazine ny hanomezana vaovao ho an'ny indostria rehetra ny zava-mitranga," touts Salazar. "Alaivo sary an-tsaina, mpanamboatra orinasa an-jatony ary orinasam-pifandraisana an-jatony ... nirotsaka ho toerana iray hizarana vaovao momba ny indostria! Ankoatra izany, ny Broadcast Beat dia manana mpanoratra mpiasa manoratra ny votoatin-tsoratra tsirairay isan'andro. Ireo mpanoratra dia nanoratra ho an'ny fanontam-pirinty avo lenta sy e-publication rehetra ao amin'ny orinasa! "
Ny famoronana eo amin'ny votoatiny, ny fitantanana ny votoatiny sy ny famelana ny votoatiny - dia efa navoaka daholo! Ny votoatiny dia manan-danja eo amin'ny varotra media ary mahafantatra loharano tokana fa manan-danja lehibe. Milaza ry zareo fa ny antsasaky ny ady no ahafantarana antsika - izahay no nanararaotra anareo tamin'ity antsasak'I AND THEN ANY!
Efa nanolo ny famoahana taloha ny Broadcast Beat izay nandrakotra ny famokarana vaovao momba ny famokarana ho an'ny media. Tsy vitan'ny hoe handeha hivoaka ny vaovao izahay - dia omena rariny amin'ny tranokalanay! Ny Broadcast Beat dia mandrakitra ny fampisehoana indostrialy manerana izao tontolo izao sy amin'ny ankamaroan'ny tranga, miaraka amin'ny horonan-tsarimihetsika an-tserasera mivantana avy any amin'ny gorodona.
"Manana fifandraisana amin'ny vahoaka rehetra ny fifandraisana an-tampony orinasa, ireo fahitalavitra sy ny orinasa, ao anatin'izany ny fikambanana toy ny National Association ny ireo fahitalavitra (Kat), Society ny Motion Sary & Fahitalavitra injeniera (SMPTE), Akademian'ny National Television Arts & Sciences (NATAS) sy ny maro hafa, "hoy Salazar.
Mila feo ny indostria - ary misy ny Broadcast Beat hanome izany. Ankoatra ny votoatiny rehetra noeritreretinao tamin'ny loharano nianaranao na taloha, ny mpamaky dia faly mahita ny habetsaky ny fitaovana manomboka eo amin'ny lafiny teknika ka hatramin'ny haitao sy eny rehetra eny. Ny Broadcast Beat dia mijery teknolojia vaovao sy vaovao mipoitra ary maneho izany avy amin'ny fomba fijery izay mahaliana ireo ao amin'ny orinasa sy any ivelany.
Mieritreritra ny hiova asa amin'ny media ve? Ny Broadcast Beat dia manana lisitry ny Hot Jobs izay tsy hahasarika ny masonao fa mety hametraka anao any amin'ny sokajy "mpankafy sy shakers" ary hampitombo ny vola miditra! Tadiavo ny asa tonga lafatra izay tsy mifanaraka afa-tsy aminao ihany fa ho toy ny lalao tsara koa ho an'ny fibodoanao vaovao! Ny fiaran-dalamby hampitombo ny fahalalana sy ny traikefa anananao, ary koa ny fototra ara-bola misy anao! Mivoaka any ny asa - ACT NOW for a change to the better!
Raha ny andian-teny hoe "rahona" niseho ka dia toa haingana fampiasana tafahoatra ny dokambarotra nauseam, ny haino aman-jery ho avy ny votoaty sy ny manatanteraka ny fangatahana amin'ny finday sy ny ordinatera fitaovana miantehitra teo ambonin'ny rahona, mba hanome ny mpanjifa maoderina izay efa tiany teny ampandehanana - afa-po fotoana sy ny toerana dia mety ho azy ireo mba hijery azy io. Aho na dia anisan'ny fikambanana lehibe iray mikasika ny rahona - ny fanentanana izay Broadcast Beat hanampy niely.
Toerana maro, betsaka loatra ny handrakofana - saingy ny Broadcast Beat dia ho any mba hahazoana antoka fa any ianao! Ny tantaram-piainana dia hanampy anao hitazona ny toetranao amin'ny endriky ny haino aman-jery izay miovaova hatrany amin'ny fiovan'ny fahasamihafana amin'ny fanovana lehibe! Miaraka amin'ny mpanoratra fanta-daza izay mampahafantatra anao tsara fa tokony ho eo amin'ny tsenan'ny fampitam-baovao! Be dia be ny asa atao - noho izany, tehirizo ny mombamomba anao amin'izao fotoana izao ary mijanona bilaogy!